Amazon Black Friday တွင်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများ ၄၀ ကျော် Androidsis
ဒီနေ့ရောက်လာတယ် နောက်ထပ်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများဖြင့်ထုပ်ပိုးလာသည့်အခြားဗုံးတစ်လုံးဖြစ်သည် Amazon မှနေ၍ ယူရို ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၀၀) ကိုဒီဂျစ်တယ်သောကြာနေ့ဖြစ်သောသန်းခေါင်ယံကြာသပတေးနေ့ဖြစ်သည့်အတွက်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
အက်ပ်များနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ Angry Birds ရာသီများ၊ Dark Guardians များ၊ Go to Full Version, MapswithMe Pro တို့၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ, Perfecty Clear နှင့် Sonic ခုန်။ အမေဇုန်မိုးတိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့ပျော်မွေ့သောထိုအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုဤနည်းဖြင့်သင်၏ Android ထုတ်ကုန်များ၌ထာဝရပျော်မွေ့နိုင်စေရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းသည့်အချိန်လေး။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများကို Android Device များရှိ Kindle Fire HD နှင့် Kindle Fire HDX 8,9″ နှင့်7on တို့တွင် Amazon Apps store မှအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဤ app များအားလုံးကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက် အမေဇုံအက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ သင့်ရဲ့ Android ကိရိယာပေါ်တွင်။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ ဒီမှာက.
1 Amazon Black သောကြာနေ့အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
2 မီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက် app သုံးခု
2.2 နှိုးစက်နာရီ Pro ကို
2.3 MapsWithMe Pro ကို
3 အမေဇုံ၏ထိပ်တန်း3အနက်ရောင်သောကြာနေ့အားကစားပြိုင်ပွဲ
3.1 အမှောင် Guardians
3.2 Edge တိုးချဲ့ခဲ့သည်
3.3 Angry Birds ရာသီ
Amazon Black သောကြာနေ့အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
Angry Birds ရာသီ
တစ် ဦး ကချာလီဘရောင်းကျေးဇူးတုံ့ပြန်
အရောင်စာအုပ် II ကို
Dash ချက်ပြုတ်ခြင်း: T&S Deluxe
အပြည့်အဝဗားရှင်း Key ကိုသွားရန်စာရွက်စာတမ်းများ
Fairway Solitaire (အပြည့်)
သစ်တောဒဏ္endsာရီများ - အချစ်၏ခေါ်သံ
Hidden Objects Thanksgiving &3ပဟေgamesိဂိမ်း
MapsWithMe Pro ကို
Merriam-Webster ရဲ့ Collegiate အဘိဓါန်
Mind Games Pro အတွက်အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ယာဉ်ရပ်နား Frenzy 2.0
မူလအစ၏ RPG ဆငျဖိုနီ
Stack'N ပဟေlesိ - ကလေးများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပဟေlingိစွန့်စားမှု
WiFi ဖိုင် Explorer ကို PRO
XiiaLive Pro ကို
မီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက် app သုံးခု
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ docs များအတွက် Google suite ရှိသော်လည်း အပြည့်အဝသွားကြရန်စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့အလွန်ထိရောက်သောအခြားနည်းလမ်းရှိပါတယ် ပြီးတော့သူတို့ကအံ့ဖွယ်အထောင်တစ်ထောင်လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆီကိုလာနိုင်တယ်။ Documents to Go သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးယူအက်စ် ၇.၁၈ ကုန်ကျသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းအပြင်အခြားအကူအညီများစွာလည်းပေးနိုင်သည်။
နှိုးစက်နာရီ Pro ကို
Un စိတ်ဝင်စားဖို့နှိုးစက်နာရီ နံနက်ယံ၌ထ။ အလုပ်သွားရန် (သို့) တက္ကသိုလ်တက်ရန်ပင်သင်အားကူညီရန်။ ၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာများစွာပါ ၀ င်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ယူရို ၁.၄၉ ဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ကြိုးစားရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။
၂၀၁၄ ၏အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက်အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများ ဂူဂဲလ်သူ့ဟာသူအရသိရသည်။ MapsWithMe သည်၎င်း၏လိုလားသောဗားရှင်းတွင်အစားထိုး။ မရသောကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂူးဂဲလ်မြေပုံများနှင့် Nokia ၏အခြားနေရာများအတွက်အစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ မရှိမဖြစ်။
အမေဇုံ၏ထိပ်တန်း3အနက်ရောင်သောကြာနေ့အားကစားပြိုင်ပွဲ
juego လှပတဲ့အပန်းဖြေဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူဓားများနှင့်ရန်သူများကိုအတူ Arcade ပြီးတော့ငါမကြာသေးမီကပြောခဲ့တဲ့ဘေးဘက် scrolling နဲ့ဒီအဆုံးမဲ့ပြေးသမားရဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ ဒီ Amazon Pack Black Free ဂိမ်းများထဲကအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလများအတွက်အကောင်းတစ် ဦး ပဟေthanိထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယျသို့? Edge Extended သည်သင့်အားခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲချိတ်ဆက်ရန်လမ်းပြလိမ့်မည်။ သာမန်ကုန်ကျစရိတ်ယူရို ၂.၃၈ ဖြင့်၎င်းသည်ယနေ့ရောင်းအားများအတွက်အခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Angry Birds Seasons အနည်းငယ်သည်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်သည် မကောင်းတဲ့စိတ်နှင့်ပျင်းဆန့်ကျင်ဆေးဝါးအဖြစ်။ ဒီအရူးငှက်တွေကိုရိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့အဆင့်အားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားပါ၊ ဒါက Angry Birds အကြောင်းပါ။ အမေဇုန်အက်ပလီကေးရှင်းမှယခုမည်သူမျှစိတ်မဝင်စားသောဂိမ်းတစ်ခု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Amazon ၏ Black Friday မှာဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ယူရို ၁၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်း ၄၀ ကျော်ပါဝင်သည်